Kursi noocee ah ayaa adiga kuugu fiican? | Ragga Stylish
Haddii eeygu yahay ninka ugu fiican ninka, kursigiisa uu jecel yahay waa in lagu qoro isla markaaba. Barkimadooda waxay si diiran u soo dhaweynayaan jirkeena daallan ka dib shaqo adag maalintii, inta lagu jiro waqtiga firaaqada iyo dhamaadka todobaadka kuraasta kuraasta waxay noqdaan saaxiibkayaga ugu aaminka badan hurdada, filimada, warfaafinta ama akhriska.
Wax kastoo shakhsiyadeed ah, waxaa jira kursi gacmeed oo qumman oo aad adiga ku sugeyso meel aad ku geyso guriga, sida ay muujiyeen xulashada kuraasta kuraasta in aan ururinay oo aad hoos ka arki karto.
Loogu talagalay dadka jecel naqshada: Rakuten.es wuxuu ku siinayaa kursi-gacmeedkan gadaal ee gadaal kaasoo kaliya bixin doonin raaxada ugu badan iyadoo la kaashanayo buundadeeda, laakiin wuxuu sidoo kale ku dari doonaa qaabab badan qurxinta qolkaaga fadhiga.
Kursiga gacantu ee classics: Haddii aad qiimeyso waqtiga la'aan waqtiga ka sarreeya dhammaan tayada kale, waxa adiga kugu habboon ayaa ah nooca dhegaha maqaarka caadiga ah, mid daran oo aad u adkaysi badan, sida moodelkan Natuzzi, oo laga heli karo elcorteingles.es.
Filimada filimka iyo kubada cagta waalan: Befara.com waa goobta booqashada haddii telefishanku diirada saaro inbadan oo waqtigaaga firaaqada ah. U daa cabitaanadaada iyo cunnooyinkaaga fudud godadka barxadaha gacmaheeda oo ku raaxeyso shineemooyinka iyo ciyaaraha kubbadda cagta wadarta raaxada inta ay kuu duugeyso dhabarkaaga
Kursiga kuraasta ee hal-abuurayaasha: Haddii aad dhibaato kala kulanto kala-doorashada kursiga kuraasta iyo kursi ruxeysa, waxaan soo bandhigeynaa qaabkan oo isku darsanaya faa'iidooyinka labadaba. Ku habboon in lagu gaaro nasashada iyada oo la ruxruxo, waxaad ka heli kartaa Miliboo.com
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Waqtiyada firaaqada » Raadi kursi ku habboon shakhsiyaddaada
Saddexda sharci ee dahabiga ah ee funaanadaha dheeriga ah